पोर्न एक व्यवहार लत हुन सक्छ | इनाम पुरस्कार
स्वास्थ्य व्यवहार लत
हालको अनुसन्धानले देखाउँछ कि व्यवहार र न केवल पदार्थहरू लत पनि हुन सक्छ। तिनीहरू मस्तिष्कको इनाम प्रणालीमा समान विशेषता परिवर्तन गर्न सक्छन् जुन कोकिन वा शराब वा निकोटीन लत उत्पादन हुन्छ। (तल हेर)। यी व्यवहारहरूमा जुआ, इन्टरनेट गेमिङ, र फेसबुक जस्तो सोशल मिडिया र सम्भवतः टेन्डर वा ग्रिन्डर जस्ता डेटिङ अनुप्रयोगहरू समावेश छन्।
यहाँ एक छ कागज विश्व-अग्रणी न्यूरोसाइनिस्टिस्टहरूले यो व्याख्या गर्दछन् किन इन्टरनेट पोर्नोग्राफी पनि लत विकार पनि मानिन्छ। यो सहभागी यौन व्यवहारको क्षेत्रमा एकाधिक शोधकर्ताहरू द्वारा सह-लेखक हो। यो प्रश्न सोध्दछ कि नयाँ CSBD निदान "आवेग नियन्त्रण विकार" श्रेणी अन्तर्गत छ, जुन अहिले हाल रहन्छ। लेखकहरूले सुझाव दिन्छन् कि सबैभन्दा विश्वस्त, वर्तमान समर्थन CSB को लागि 'नशे की लत विकार' को रूपमा हो।
यो छोटो, zippy एनिमेसन बच्चाहरु को बारे मा अश्लील लत। यो एक छ लामो एनीमेशन त्यो वास्तवमा मूल कुरा बताउँछ।
यी धेरै विकारहरू प्राकृतिक इनामहरू वा खाना, सम्बन्ध, र यौनको प्राकृतिक ताकतको एक 'अनौठो' संस्करणमा प्रभावकारी हुन्छन्। यसको उच्च स्तरको नुन, चकुर र चिसोको साथ जंक फूड उच्च कैलोरी इनाम को मात्रा मा 'अनौठो' खाद्य पदार्थ हो जुन मस्तिष्क को कमी विकसित भएको छ; सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धको अतिशैली संस्करण जस्तै, एक क्लिकमा सयौं साथीहरू; र इच्छुक 'हट babes' को आफ्नो अनन्त परेड संग इन्टरनेट अश्लील सेक्स को एक असाधारण संस्करण हो।
ड्रग्सको साथमा, प्रयोगकर्ताहरूले उही 'हिट' पाउन उच्च खुराक चाहिन्छ। इन्टरनेटको साथमा, समय भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरूले उही प्रभाव महसुस गर्न थप नवीनता वा अधिक तीव्रता चाहिन्छ। पोर्न उद्योग यो प्रदान गर्न केवल धेरै खुसी छ।
डूपामिन स्तरको रूपमा 'इनाम' प्रत्याशित हुनुपर्दछ, यो इनाम प्राप्त भएको बेला यो छिट्टै फेरि पतन हुन्छ। प्रयोगकर्ताहरुले पुरस्कार आर्जन गर्न को लागी उपन्यास सामाग्रीमा क्लिक गर्न आवश्यक छ। यदि हामी मस्तिष्कलाई निरन्तर आपूर्तिको निर्माण गर्न बाध्य राख्छौं भने, यसले प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ र सुरक्षा उपायको रूपमा उत्पादनलाई घटाउँछ। यदि हामी बिंगे बनेको छ भने, दिमागले यो जीवन्त उद्देश्यको लागि आकस्मिक हुनुपर्दछ र यसको संतोष ('पर्याप्त' भएको छ) तंत्र ओवरराइड गर्नु पर्छ। बारीमा, डोपामाइनको उच्च स्तर डेल्टा एफोस भनिन्छ प्रोटीनको रिलीज ट्रिगर गर्दछ। यसले हाम्रो इनाम प्रणालीमा बनाउँछ, दिमागले हामीलाई महत्त्वपूर्ण इनामलाई ध्यान दिन, सम्झन र सम्झन मद्दत पुर्याउने प्रयास गर्दछ।
अब लक्षण प्रक्रियाको परिणामस्वरूप चार विशेषताहरू मस्तिष्क प्रकार्यमा भौतिक परिवर्तनहरूसँग सम्बन्धित छन्। यी हुन्:
• आम्लिस नियन्त्रण प्रणाली - सम्मोहनता
• घातक तनाव सर्किट
'डिसेन्साइटिसेशन' प्रसन्नको लागि एक नम्र प्रतिक्रिया हो, विशेष गरी प्राकृतिक इनामहरू, जस्तै खाना वा अन्यसँग सम्बन्धित सम्बन्ध। यो सामान्यतया पहिलो लत सम्बन्धी दिमागले अश्लील प्रयोगकर्ताहरूलाई सूचना दिन्छ। तिनीहरू उदास, ऊब, चिसो र चिसो महसुस गर्छन्। डोपामिन सङ्केत कम र अन्य परिवर्तनहरूले दिनहुँ सुखी र डुबामिन-बढ्दो गतिविधि र पदार्थको लागि 'भूखा' को लागी भारी प्रयोगकर्तालाई कम संवेदनशील छोड्छ। उनीहरूलाई बज्नको लागि ठूलो र अधिक उत्तेजना चाहिन्छ। उनीहरूले अनलाइन समय, किनाराको माध्यमबाट लामो समयसम्म खर्च गर्न सक्दछन्, हस्तमैथुन गर्दा हेर्दा वा पूर्ण भिडियो खोजी गर्नका साथ अन्त्य गर्न सक्दछन्। तर desensitisation बढ्नको लागि नयाँ शैलियों, कहिलेकाहीँ कठिन, अजनबी, पनि परेशान हुन सक्छ। याद गर्नुहोस्: झटका, आश्चर्य र चिन्ता एड्रेनालिइन जैक अप डोपामिन उत्पादन गर्दछ र यौन अत्याचार बढाउँछ।
यसको विपरीत, हाम्रो ध्यान दिइने एक मात्र कुरा र हाम्रो आत्मिक आत्मा बढ्छ हाम्रो इच्छा, वस्तुलाई व्यवहार वा छनौट को वस्तु हो। यो किनभने हामी यो 'धेरै संवेदनशील' भएको हो। संवेदनशीलता को सक्रिय cravings या आनंद को बेहोश सुपर स्मृति, 'euphoric स्मृति', जब सक्रिय। क्यु-मेमोरी लिंक मस्तिष्क हो जसले 'एकसाथ तार गर्दछ, प्रक्रियामा एकसाथ आगो' प्रक्रिया। यो परिचित Pavlovian स्मृति ले नशे को जीवन मा कुनै अन्य गतिविधि को तुलना मा अधिक लत बढावा गर्दछ।
पुनर्वित्त तंत्रिका जडानहरूले लत सम्बन्धी संकेतहरू वा विचारहरूको प्रतिक्रियामा इनाम प्रणालीलाई बज्जाउँछन्। कोकीन नर्तकहरूले चिनी देख्न सक्छन् र कोकीनको बारे सोच्न सक्छ। एक चश्मेले चश्मेको चिन्ता सुन्नु वा बियर मुस्कुराउँछ किनकि उसले पब पास गर्छ र तुरुन्तै जान्छ।
इन्टरनेट अश्लील लतका लागि, कम्प्यूटरमा घुमाउने जस्ता एक पप अप देख्न सकिन्छ, वा घरको मात्र रहन्छ, अश्लीलको लागि तीव्र cravings ट्रिगर गर्दछ। के हो अचानक धेरै हर्नियर (साँचो लिग्दो) जब उनको श्रीमती, आमा वा दुलही खरीदारी जान्छ? नराम्रो। तर सम्भवतः उनी सोचेका छन् कि यदि उसले autopilot मा छ, वा कसैले अरूलाई दिमाग नियन्त्रण गर्दछ। केहि संवेदनशील अश्लील प्रतिक्रिया को वर्णन को रूप मा 'एक सुरंग जो केवल एक भाग छ दर्ज: अश्लील'। सम्भवतः उनीहरु एकदमै छिटो, तीव्र हृदयघात, समेत चिन्ता लाग्दछ, र उनी सबैको बारेमा सोच्न सक्दछन् र उनीहरूको मनपर्ने अश्लील वेबसाइटमा लगिङ गर्दैछ। यी संवेदनशील लत मार्गहरूको उदाहरणहरू इनाम प्रणाली सक्रिय गर्दै, चिल्लाउँदै, "अहिले गर!" यौन अपराधको खतरा पनि तिनीहरूलाई रोक्दैन।
हिपोउडाइरेटिटी, वा पूर्व फ्रान्सको क्षेत्रहरूमा कम मस्तिष्क गतिविधि कम, बलियो अवचेतन cravings को सामना मा कमजोर शक्ति वा आत्म नियन्त्रण। यो पूर्व-सामनेका क्षेत्रहरूमा खैरो वस्तु र सेतो कुराको सिकारको परिणामको रूपमा हुन्छ। यो मस्तिष्कको भाग हो जसले हामीलाई लामो समयको सुअवसरको लागि राम्रो नपाउने विकल्पहरूमा ब्रेक राख्न मद्दत गर्दछ। यसले हामीलाई प्रलोभन महसुस गर्दा आफैलाई 'होइन' भन्न मद्दत गर्दछ। यस क्षेत्रको साथ घटाइयो, हामीसँग कमजोर परिणामहरू खोज्न सक्ने क्षमता छ। यो टगको युद्ध जस्तै महसुस गर्न सक्छ। संवेदनशील बाटोहरू 'हाँ!' चिल्लाउँदै जबकि उच्च मस्तिष्क भनिरहेको छ 'होइन! फेरी हैन!' एक कमजोर अवस्थामा मस्तिष्कका कार्यकारी नियन्त्रण अंशहरू संग, लत मार्ग सामान्यतया जित्छ।
व्यभिचारीहरूलाई दुर्व्यवहारमा दुर्व्यवहार गरीएको छ। न केवल उनीहरूले अधिक डोपामाइन छन् कि उनीहरूलाई जोखिम (गतिवर्ती पेडल पूर्णतया निराश छ) लिनको लागि ड्राइभिङ गर्दछ, तर अगाडिल्लो लोबहरू पूर्णतया विकसित भएन, (ब्रेकहरू पनि राम्रो काम गर्दैनन्)।
अवयव तनाव सर्किट। यसले पनि नम्रताले पनि उत्साहित र रिफ्रेश गर्दछन् किनभने तिनीहरू शक्तिशाली संवेदनशील मार्गमा सक्रिय हुन्छन्।
यी घटना सबै लतहरूको मूलमा छन्। एक अश्लील पोष्ट को पुनर्प्राप्त गरे उनलाई माथि संक्षेप: 'म पर्याप्त कहिल्यै प्राप्त गर्न सक्दिन कि मलाई कुन कुराले सन्तुष्ट पार्छ र यो कहिल्यै कहिल्यै मलाई सन्तुष्ट पार्दैन'।
निकाल्नु धेरै मानिसहरू विश्वास गर्छन् कि लतले सहि सहिष्णुता दुवै (एकदम प्रभाव पाउनको लागि, डिसेन्साइटाइटेशनको कारण) र क्रूर हटाउने लक्षणहरू दुवैलाई सघाउँछ। वास्तवमा, न त लतको लागि आवश्यक छैन - यद्यपि आजका अश्लील प्रयोगकर्ताहरूले प्राय: दुबै रिपोर्ट गर्छन्। सबै लत मूल्यांकन परीक्षण साझा छ, 'नकारात्मक नतिजाको बावजूद निरन्तर उपयोग'। त्यो लतको सबै भन्दा भरपर्दो प्रमाण हो।
यदि तपाईं अनुसन्धानमा सहिष्णुता र वृद्धिमा थप जानकारी चाहनुहुन्छ भने, क्लिक गर्नुहोस् यहाँ (बाह्य साइट, नयाँ सन्झ्यालमा खुल्छ)।
<< लत रिकभरी >>